Soo Saarida Tareenka Qaranka ee Xawaaraha Sare ma ahan kiiska TÜLOMSAŞ laakiin waa Kiiska Qaranka ee Eskişehir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirWax soosaarka Xawaaraha Qaran ee Qaranka waa midka qaranka ee Eskisehir, ma aha TÜLOMSAŞ
11 / 07 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Tulomakada waxsoosaarka tareenada qaran ee dalka oo dhan maaha sabab qaran ee Eskisehir
Celalettin Kesikbaş, Madaxa Hore ee Eskisehir Chamber of Industry: dadaal Waa muhiim in la sameeyo dadaal loogu talagalay soo saarida tareenka xawaaraha sare iyo tareenada xawaaraha sare ee qaran ee Eskisehir iyo in ay sameeyaan daraasad ku filan oo ku saabsan mowduucaan. Tani ma aha oo kaliya kiiska TÜLOMSAŞ, laakiin sidoo kale sababaha qaran ee Eskisehir.
Eskişehir Chamber of Industry (ESO) Madaxweynaha Celalettin Kesikbaş, barnaamijka barnaamijka ES TV, Tifaftiraha Taleefishinka ES TV Cali ayaa ka jawaabay su'aalo. Kesikbaş ayaa ku sheegay warshadaha Eskisehir iyo shaqadooda inay yihiin Rug.
Iyadoo la tixraacayo muhiimada ay leedahay nidaamka tareenka xawaaraha sare ee qaranka iyo degaanka ee Eskisehir, Kesikbaş ayaa yidhi, "Sababtoo ah waxaan haysanay dhaqano in ka badan boqol sano waana nidaamyada tareenka. In Eskisehir, waa muhiim in la fuliyo daraasadaha wax soo saarka tareenka xawaaraha sare iyo tareenada xawaaraha sare leh iyo in la sameeyo daraasado ku filan oo ku saabsan mowduucaan. Tani waa sababaha qaran ee Eskisehir, waa sinaan la'aan. "Ayuu yiri. Natiijadu, waxaanu nahay dhammaan ururo leh TÜLOMSAŞ. Tani waa sababta qaranka ee Eskisehir. Taas macneheedu waa boqolaal shirkadood ayaa cunaan rooti. Tani waa nidaamka deegaanka. TÜLOMSAŞ kali maahan. Waxaan leenahay shirkado aad u culus oo ku yaal Eskisehir si ay u soo saaraan tiknoolajiyadaan. Waxaan sidoo kale ognahay in kuwani ay ku jiraan Eskisehir. Waxaan u baahannahay kaliya inaan si habboon u sharaxno nidaamkan dabeecadda ah kuwa ku yaala Ankara. TÜLOMSAŞ wuxuu noqon karaa hogaamiyaha ganacsigan, laakiin kumanaan qof ayaa cuni doona kibis. Tani waa xuquuqda Eskisehir. Anigu kuma faraxsanyn inaan na siino xaqaan. Waxaan u dagaalami doonaa dhamaadka. Waxa aan sameyno iyo waxa aan u keeneyno Eskisehir. Sidaad ogtahay, waxaa jira mashruuc URAYSİM oo ku yaal Eskisehir. URAYSİM iyo tareenka xawaaraha sare ee qaranka ayaa ah wax aan lagama maarmaan u ah Eskisehir. Waxaa jira laba waxyaalood oo furan oo u furan Eskisehir, mid waa nidaamyo tareen ah, mid kalena waa duulimaadka.
WAXAAN SAMAYNAYAA QAABKA
Volkswagen sameeyey Turkiga by Madaxweynaha ee ESO ayaa sheegay in ay la qorsheeyay si ay u qabtaan waxbarashada ee maalgelinta warshad baabuurta si ay u yimaadaan si ay Eskisehir Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir aad u qiimo badan," ayuu yiri
Turkey qorsheeyay in la sameeyo by Volkswagen maalgelinta warshad baabuurta shaqada in muujinayaa Kesikbaş socday inuu Eskişehir, "gaari Tani ma aha arin cusub. Shirkad muhiim ah oo jarmal ah oo asal ahaan ajnabi ah, laakiin dhammaadka 2018 ee 2019, sida wararkeena ayaa ah bilowgii maalgashadeena. Maalgashi muhiim ah. aad u muhiim u ah Jamhuuriyadda Turkey. Eskisehir, waxaanu qabanay shaqooyinka lagama maarmaanka u ah bisha 6 iyo sameynta bandhigyada lagama maarmaanka ah. Waxaan wadaagnay dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah qaabdhismeedka dhaqaalaha ee magaalada si loo helo waxbarasho. Laakiin waxaa jira arrimo ay maal-galiyuhu u eegayaan maalgashiga noocan ah. Waxay ka sameeyaan xisaabin badan oo ka soo jeeda dhinaca dekadaha si ay u shaqeeyaan qaybta hoose. Waxaa jira saddex ama shan magaalo oo musharax ah. Sannadkan, sida Golaha Wakiilada ee Eskisehir, waxan samaynay dhammaan noocyada shaqada oo wali sii socdo. Mawduucyada laga dooday waa xaqiiqda ah in ay jiraan xisbiyo ku yaal Gebze, Karasu, Adapazari, Kocaeli iyo Bursa. Laakiin magaalad waliba waxay leedahay dhawaaqyo is burinaya. Laakiin xaqiiqda ah in maalgelinta noocan oo kale ah ay tahay Eskisehir waa mid aad u qiimo badan Eskişehir. Taas macquul maaha in la yimaado, laakiin waxaan isku dayeynaa in aan u soo jeesano si wanaagsan. Hubi in ay jiraan nooc kasta oo ah shaqo qabasho. Waxaan leenahay dhammaan xiriirka lagama maarmaanka ah. Aagagga loo yaqaan 'Industrial Zone' waxay leeyihiin hawlo naga mid ah. Waan hubaa in qolalka kale ay sidoo kale firfircoon yihiin. "
DAKHLIGA WAXAA LAGA QAADO
Sharaxaadda tirada bakhaarrada iyo khidmooyinka la soo bandhigay ee Eskisehir, Kesikbaş ayaa sheegay, bal inay jiraan korodhka tirada iibka guryaha ee loo gooyey. Si kastaba ha ahaatee, iibka guryaha ee kale ayaa hoos u dhacaya. Tirada biilasha qarsoodiga ah ayaa si aad ah u kordhay bilihii ugu dambeeyay ee 6. Tusaale ahaan, tirada codsiyada abaalmarinta ah ee ka soo horjeeda 2 kun TL bishii Janaayo waxay ku sii socotaa 708, 606, 600. Tani waxay ku jirtaa kooxda 400 sannadkii hore. Laakiin markaan eegno qaybinta qaddarka biilka la soo bandhigay, 10 wuxuu ku dhowaad hal milyan. 18 million bishii hore, 28 million bishii January. Sanadkii la soo dhaafay tirooyinkaasi waxay ahaayeen wax ka yar kala badh iyaga. Mar labaad Eskisehir, waxaa jira korodhka tirada jeegagga aan la bixin. Kordhinta laba laab ayaa la barbardhigay sanadkii hore. Xaddiga ayaa sidoo kale laba jeer ka badan sidii sannadkii hore. Gaar ahaan, bishii Jannaayo iyo Maarso, Maarso, Abriil, 14 million rubucyo aan loo baahnayn. Marka aan eegno tirada, waxay muujinaysaa waxyaabo badan. Waxyaabaha si fiican uma socdaan. Laakiin weli waa inaan si taxadar leh u eegnaa. Sida Eskişehir, waxaan qaadnay deymo badan waxaanan haysanaa kayd yar. Badbaadadayadu way hoos u dhaceen, waxaana jira foosha oo ka yimaada sinnaanta.
Kesikbaş ayaa sheegay in waaxda warshadaha waa in la taageeraa oo idhi, M Ma aha dhibaato ay tahay in lagu iibiyo ajaanibta. Ma aha in laga baqo. Shirkadaha Turkigu waa lacag jaban, laakiin gaar ahaan kuwa warshadaha ayaa caajis ah. Sida qol waa inaan u abuurno rajo dadka, laakiin wadahadalku sidan ayuu u dhacayaa: Anigu waan iibin doonaa, waan sii deynayaa, waan sii deynayaa. Sababtoo ah warshadaha ayaa aad u adag. Marka uu galo warshadaha warshadaha, shaqaaluhu wuxuu sheegayaa inuu ka faa'iidaysto qiimaha ka sarreeya. Waxaad tagtaa gobolka, gobolka ayaa kuu arkaa inaad tahay tuug. Waxaad tagtaa guriga, waxaad shaqeysaa sabtida, waxaad tageysaa dibadda, waxaad tagtaa ganacsiga kadib. Warshaduhu waa wax aan faa'iido lahayn. Waxaan laheyn doorasho culus. Waxay abuurtaa rajo ama khasaaro kasta oo doorasho doorasho kasta ah. Waxaan leenahay dhibaatooyin dhaqaale oo dibadeed. Waxaa jira isbeddello suuqyada maaliyadeed. Codsi ayaa ku dhacay dalka. Warshaduhu waxay u baahan yihiin in la taageero muddadaas. "
XULASHADA KOOWAAD WAXA LA QAADO
Kesikbaş ayaa sheegay in arinta doorashada ay tahay in la xiro, dhaqaalaha waa in laga wada hadlo. "Waxaannu oranay in arrinta doorashada ay tahay in la xiro ka dib doorashada waana in aan eegnaa dhaqaalaha. Tani waxay aad muhiim ugu tahay midnimada qaran ee dalka. Aanu dhaqaaleyno dusha sare. Laakiin doorashadii 23 June waxay dib u dhigtay. Ilaa hadda, iyada oo aan loo eegin natiijada siyaasadeed, mawduuca loo-shaqeeyaha waa: Doorashadu way dhammaatay. Ka dib markaa waxaan ka hadli doonnaa siyaasadda, ma aha dhaqaale ahaan qaran qaran. Waxaan u maleynayaa inaan mar kale ku noolahay maalmahaas. Waxaa jiraya fidmo. Warshaduhu waxay u baahan yihiin maalgelin. Bankiga Maalgashiga wuxuu u baahan yahay in la tixgeliyo Waa lagama maarmaan in la xoojiyo caasimada warshadaha ee warshadaha. Tani ma shaqeynayso iyada oo xireysa ama yareynaysa warshadaha. Qeybaha warshadaha ee la maalgeliyo waa in lagu maalgeliyaa ugu yaraan hal bilyan oo doolar iyo dadka waa in lagu tilmaamaa habka dhoofinta. In shirkadda ugu horeysay 100 2018 ee Turkey ayaa sheegay in 500 boqolkiiba dakhliga guud ee liiska xnumx ee rafcaanka inay Turkey si aan aan bixinta danta. Hubso in shirkadan weyn ee shirkadda 50 ay ka tarjumeyso Eskisehir. Waxaad soo saartaa, waad ku guuleysatay. Lacagta aad kasbatay waxaa sidoo kale lagu maalgeliyaa bangiyada mar kale. Kadibna ma kori kartid shirkad ".
HORUMARINTA WAXAA LAGA HELAYAA
"Waaxda duullimaadka ayaa ah xiddig qurux badan oo ku yaal Eskisehir, Kes Kesikbaş," Kooxdayada ayaa si fiican u shaqeysa, shirkadaheenuna waa heer sare. Waxaa jira baahi loo qabo shirkadaha saqafka ah ee laga yaabo inay noqdaan farsamoyaqaan Eskisehir. Waxaan leenahay shirkad ku jirta qaybta alaabta caddaanka ah. Waxaa jira nidaam dabiici ah oo hoos yimaada, boqolaal shirkadood ayaa cunaya rooti. Waxaan leenahay TAI. Waxaan leenahay duulimaadka Alpine. Under waxaa, dufan oo shirkad ah oo kibis cuno Dareenkan, waxaan hubaa in waaxda duulimaadka ay horumar ku sameyn doonto Eskisehir. Waxaan leenahay shirkado aad u wanaagsan. "
"Eskisehir, Turkey ee dhoofinta by 5 boqolkiiba wanaagsan," ayuu yiri Kesikbaş, "Sida laga soo xigtay tirokoobyada our, dhoofinta our Turkiga ayaa koray agagaarka boqolkiiba 18 ah marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay. Sidaas waxa 12 dhow celceliska Turkey. Dhoofintayadu waxay sii kordheysaa. 1 bilyan 60 million 2018. Wax walbaa kuma xumaanayaan Eskisehir. Haddii aan ku darno saldhigyada saldhigga ah ee Istanbul, 2.5-2.6 waa malaayiin tirakoob. Sidaas Eskisehir on guud dhoofinta Turkey. Turkey ayaa sidoo kale waxaa kordhaya ganacsiga this. Waxaa sidoo kale jira hoos u dhaca soo dejinta. Maanta 12 bishii waxaan soo dhoofnay 868 Milyan Dollar. Marka aad eegto kor u kaca hadda. Waxaan hunguriga. Si kale haddii loo dhigo, waxaanu dhalin karnaa goolasha 3 ee Jarmalka iyo Jarmalka ayaa u muuqda in ay dhalinayaan goolal 2. Sanadkii la soo dhaafay miiska ma uusan sidan ahayn. Sannadkii hore waxaan ku dhoofnay 1 bilyan 60, 920 soo dejinta. Waxqabadkayagu sanadkan waa ka fiican yahay. Waxaan sameyneynaa shaqo aad u culus. Bandhiga shakhsiyadeed ee shirkadaheenna ayaa sidoo kale aad muhiim u ah. Sababtoo ah dhamaanteen guriga, waxbaa hoos u dhacaya, waxaan qaadan doonaa boorsooyinkayaga dibadda ah. Taasi waa hubaal. Wax badan ayaan dhoofin doonnaa. "
SHAQO LA'AANTA KORDHIYO ku ah dalka Turkey
Kesikbaş sheegay in kororka shaqo la'aanta dalka Turkiga, "Macluumaadkan looguma kaydiyaa. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira xog shaqo la'aanta ah oo ku saabsan 14,7 boqolkiiba marka aad eegto tiro aad u sareysa. Waxaa jira heerka shaqo la'aanta ee 25-26 ee shaqo la'aanta dhalinyarada. Sidee ayaad u tiraahdaa tani waxay ka muuqataa Eskisehir? Guud ahaan, ma jiraan shaqaale tiro badan. Dadka intooda badani waxay u guureen shaqsiyaadka caadiga ah si loo dhimo miisaaniyadahooda. Qofka 241 ee aad la shaqeynayso waa shaqaalaha caadiga ah ee qofka 230. Waxaa laga yaabaa in shakhsiyaadka 5-10 ay ka tagaan halkaas. Caadi ahaan shaqaale sababtoo ah si kastaba ha ahaatee qof kastaa wuxuu isku dayayaa inuu ku sii jiro meelahaas nabadgelyada leh. Eskisehir ma jirin wax ku dhegan labiska. Waraaqahan oo kale waa nasiib daro. Si aan u sheegno, waxaanu sameynaa booqashooyin xubinnimo. asxaabteena waxay u baahan yihiin inay adkeeyaan. Warshadaha ma dhicin lacag weyn. Warshadaha ma haystaan ​​nolol tayo leh sida taxanaha. Gaar ahaan macalimiinta ka shaqeeya Eskisehir waa maalin iyo habeen shaqo. Waxay isku dayayaan inay adag yihiin waxaanan aaminsanahay in ay wadaagaan shaqadooda. "
Isha: Wargeyska Anadolu
Ogeysiiska Qandaraaska: Shaqada qashinka tareenka waxaa lagu qaban doonaa TÜLOMSAŞ
Eskişehir Tareenka Xawaaraha Sare ee Qaranka Dejin Wax Soo Saar Ha u khasaarin!
National Express tareenka ka Eskisehir Dhanka kale aan la soo saaray ee Turkey
tareenka xawaaraha qaranka
Qalabka qaranka ee tareenka xawaaraha sare